IGogle Pixel 3 kunye ne-3 XL ziyavela kunikezelo olutsha | I-Androidsis
Kwi-Okthobha elandelayo 9, ekukude malunga neeveki ezintathu, kuya kulandela iifowuni eziphambili zaseMelika. Sitsho ngokucacileyo ukuba IPixel 3 kunye ne-3 XL, izixhobo ezimbini ezithi, emva kweeveki ezininzi zokuhleba kunye nokuqikelela okubangelwa ngabo, ezinye iinkcukacha kunye neempawu sele zibonakala zikhuselekile, kunye noyilo lwazo.
Ngesi sihlandlo, u-Evan Blass, ongomnye wezona zinto zidumileyo ezivuzayo kunye neetechophiles kumnatha, oqhele ukuba nezinga lokubetha eliphezulu, uzise ukukhanya Ukunikezelwa okutsha okubhekisele kwinkangeleko yePixels elandelayo yenkampani.
Ngokomfanekiso wekhompyuter oziswe ekukhanyeni, I-Pixel 3 ayiyi kuba nenotshi kuyilo lwayo, yiyo loo nto ulibale umkhwa oqhele ukubandakanya iifowuni zamva nje. I-Pixel 3 XL, okwangoku, iya kuyonwabela Inotshi Kwiskrini sakho, njengoko ulwazi olutshanje lucebisile.
Ukusukela ukuba nina nihlala nibuza… pic.twitter.com/DpRqzsyRem
- Evan Blass (@evleaks) Septemba 21, 2018
Njengoko ubona, i-Pixel 3 ine-bezel ephezulu kunye nezantsi kunye nobukhulu obukhulu. Kweyokuqala sisandisi-lizwi esikhulukazi sokufowuna kunye nezivamvo ezimbini zokufota. Okwangoku, IPixel 3 XL inotshi ephezulu, apho kukho izivamvo ezimbini zokufota kunye nesithethi sefowuni esisikwe kancinci. Kuzo zombini ezi zixhobo, i-bezel engezantsi ikwagcina into ebonakala ngathi sisithethi sesibini.
Fumanisa: UGoogle uza kubonisa iPixel 3 kunye neParis
Okokugqibela, kufanele ukuba kuqatshelwe ukuba, ngaphandle kwento yokuba yonke into ibonisa ukuba oku kuyakuba yimbonakalo yangaphambili yezi fowuni kudala zilindelwe, Akufanelekanga ukuba iGoogle ingasothusa ngento engalindelekanga ngo-Okthobha u-9, Umhla oza kwenziwa ngawo umboniso ngesitayile. Ukongeza, ngokubhekisele kubuchwephesha bayo, yonke into ilungiselelwe ukubanjwa. Nangona kuqinisekile ukuba baya kuza neempawu ezinomdla esiza kuzazi kungekudala.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » U-Evan Blass uqinisekisa uyilo lweGoogle Pixel 3 kunye ne-3 XL kunikezelo olutsha
Ume kwiqonga leyona cell phone imbi embalini.
Inkampani yaseKorea irejista ilungelo elilodwa lomenzi wechiza le 'Samsung Buds' eYurophu